Tuapse -, सामान्यतः ज्ञात रिसोर्ट शहर Tuapse को सुरम्य बे को बैंकहरू मा स्थित। छैन टाढा, वस्तु। Lermontov गर्न अर्को एक बच्चाको शिविरमा "समुद्र लहर" छ। यो जलवायु अत्यन्तै नरम र न्यानो छ। यस क्षेत्रमा घाम दिन को एक ठूलो संख्या विशेषताहरु। समुद्र स्नान र सफा हावा एक सुखद आराम गर्न योगदान र छोराछोरीको स्वास्थ्य बढाउँछ।
कोठा र क्षेत्र
तीन-मंजिल्ला शिविरमा आवास (2 भवनहरु) समुद्र नजिक निकटता मा स्थित। बच्चाहरु 4-6 मान्छे को लागि सहज कोठा मा समायोजित गर्दै छन्। कोठा बेड, दराज, छ बिस्तर टेबल। प्रत्येक एक बाथरूम (चिलमची र स्नान) छ। हल असबाबवाला फर्नीचर र टिभि संग सुसज्जित छ। लिनेन्स साप्ताहिक नौकरानियां परिवर्तन हुन्छन् र भिजेको कोठा हरेक दिन साफ छन्। दस्तों अप 25-30 मान्छे बनेको छन्। प्रत्येक एक शिक्षक र दुई सल्लाहकार छ।
शिविरमा प्रशासन ल्यान्डस्केपिङ्ग र यसको सुधार गर्न ठूलो ध्यान दिन्छिन्। Outsiders यहाँ अनुमति छैन। शिविरमा घडी वरिपरि गार्ड सहित। इलाका को परिधि मा सीसीटीवी क्यामेरा स्थापित गर्दै छन्, घेरेदार आंगन छ। एक प्रणाली पनि छ सार्वजनिक ठेगाना।
"सागर लहर" - पाँच भोजन संग एक शिविरमा। मेनु धेरै ध्यान दिएर डिजाइन गरिएको छ, यो विविध छ। dietitian हेर्दै छोराछोरीको पोषण। क्यालोरी मा 3000 किलो कैलोरी भन्दा कम छ। मुख्य शक्ति आपूर्ति गर्न साथै, छोराछोरीलाई दैनिक फल र तरकारी प्राप्त। साथै, मेनु र पेस्ट्री र ताजा जडीबुटी विभिन्न समावेश छ। बच्चाहरु टेबल मा एक स्वच्छ कोटिंग संग विशाल भोजन कोठामा खान्छन्। कक्ष सेवा Waiters। 1000 मान्छे को लागि डिजाइन शिविरमा भोजन कोठा।
इलाका एक चिकित्सा कोर छ। छोराछोरीको स्वास्थ्य स्थिर निगरानी अन्तर्गत छ। त्यहाँ चार-घण्टा कर्तव्य pediatricians छन्। त्यस अवस्थामा, एक बच्चा बिरामी छ भने, उपचार यसलाई अत्यधिक योग्य डाक्टर नियुक्त गरिनेछ। दन्त र उपचार कोठा आधुनिक सुविधाहरु र उपकरण संग सुसज्जित छन्। निस्सन्देह, एक छ लाउने र सबै आवश्यक औषधि।
डेल "समुद्र लहर" यस्तो मिर्गी रूपमा रोगहरु भोगिरहेका छन् जो बच्चाहरु स्वीकार गर्दैन, सूर्य, अस्थमा, enuresis, मधुमेह, क्षयरोग, अपवाद, संक्रामक रोग, मृगौला विफलता, हृदय रोग बिना गर्न एलर्जी।
"सागर लहर" - आफ्नो बच्चा आराम मात्र होइन जहाँ, तर पनि तपाईंको स्वास्थ्य सुधार एक शिविरमा। मान्छे आयोडिन-समावेश खनिज पानी पानी हाले। अन्य कुराहरु, छोराछोरी को लागि चाय (औषधीय जडीबुटी आधारमा पेय) को एक किसिम तयार भोजन कक्ष, को स्नायु प्रणाली र सारा शरीर मा एक लाभदायक प्रभाव Cooks। यहाँ उपचार छ:
श्वसन प्रणाली को रोगहरु।
पल्मोनरी रोगहरु। उपचार वातन समुद्र हावा पनि समावेश छ। यसलाई विशेष सुसज्जित ठाउँमा, समुद्र तट मा सही रात र दिन निद्रामा छ।
हड्डी र मांसपेशीमा को रोगहरु।
गलत मुद्रा। नरम मेरुदण्ड stretching बच्चाहरु यस्तो समस्या तोकिएको हुन सक्छ।
शिविरमा विशेषज्ञहरु यूवी-उपचार, inhalation र चुम्बकीय उपचार समावेश जो एक विशेष शारीरिक उपचार को, कार्यक्रम विकास गरेका छन्।
"सागर लहर" - जो आफ्नो बच्चा समय धेरै मजा खर्च हुनेछ एक शिविरमा। बच्चाहरु को लागि संगठित पैदल पर्यटन र hikes छन्। अतिरिक्त शुल्क लागि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ:
एक पानी पार्क;
Gelendzhik मा सफारी पार्क;
पनि डुङ्गा मा भुक्तानी शिविरमा आयोजित डुङ्गा यात्रा। मनोरञ्जन कार्यक्रम कुशल शिक्षक, डान्सरहरू, कलाकार, फिलिम र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू अभ्यास पारित विकास, मूल्य मा समावेश गरिएको छ कि। शिविरमा शौक समूहका एक किसिम संचालित। छोराछोरी गेमिङ घटनाहरू आयोजित गर्दै दिनमा, संगीत र खेल घटनाहरू होस्ट। साँझ आयोजित discos र चलचित्र स्क्रीनिंग। धेरै रोचक र मनोरंजक छुट्टी "नेप्च्युन दिन" र "प्रतिस्पर्धा सुन्दर र सुन्दर महिला हो।"
समुद्र तट शिविरमा
समुद्रको तत्काल वरपर स्थित शिविरमा (Lermontov), - "समुद्र लहर"। समुद्र तट को भवन देखि बस 30 मिटर छ। तटीय क्षेत्र सानो पेबल्स संग डटेड छ। वर्षा, शौचालय, sunshades डेक कुर्सियाँ: समुद्र तट धेरै सुविधाजनक, यो तपाईं आवश्यक सबै संग सुसज्जित छ छ। छोराछोरीको सुरक्षाको लागि बेला भेट्नु Tutors र सल्लाहकार पौडिरहेका। साथै, समुद्र तट क्षेत्र निरन्तर काम गरिरहेको छ र उद्धार सेवा। सबै आवश्यक सुरक्षा उपकरण संग नाउ सधैं तयार राखिएको छ। शिविरमा मा, अन्य कुराहरु, यो यसको आफ्नै, एक ठूलो गजेबो संग घाट सुन्दर lawns र फोहराहरू संग सजाया छ। सुरक्षित, समुद्रलाई सुविधाजनक पहुँच पनि छन्।
शिविरमा एक बच्चाको क्याफे-पट्टी संचालित। प्रेमीहरूको पढेर पुस्तकालयको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। "सागर लहर" - शिविरमा (Tuapse) पनि यसको आफ्नै सिनेमा छ। बच्चाहरु र आमाबाबुले स्थानीय किनमेल मा स्मृति उपहार पसल सबै प्रकारका प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। बच्चाहरु को लागि त्यहाँ खेल बास्केटबल, भलिबल, टेबल टेनिस, फुटबल मैदान हो। आराम लागि गजेबो, त्यहाँ बस Waterfront मा छन्। तिनीहरूले राखिएका छन् र शिविरमा बाँकी।
बच्चा को लागि एक अविस्मरणीय व्यवस्था गर्न चाहनेहरूको आमाबाबुले गर्मी छुट्टी, तपाईं निश्चित Tuapse मा पठाउन गर्नुपर्छ। उसलाई जस्तै शिविरमा "समुद्र लहर" मा आराम आवश्यक छ। प्रति पारी बारेमा 30-40 हजार rubles (21 दिन) .. - हुनत, पाठ्यक्रम, परमिट यहाँ एकदम महंगा छन् शिविरमा मा एक अतिरिक्त लागत र छोराछोरीको वितरण तिनीहरूलाई बिक्री ठूलो शहर कम्पनीहरु। मास्को देखि, उदाहरणका लागि, शिविरमा यात्रा 10 हजार लागत। Rubles। बच्चाहरु अनुभवी शिक्षकहरू सँगसँगै। रेल मा, प्रत्यक्ष मनोरञ्जन र खाना संगठित छ। हामी आवश्यक पहिलो सहायता लागि पहिलो सहायता किरा छ caregiver।
तपाईं के कागजातहरू वाउचर को अधिग्रहण लागि प्रदान गर्न आवश्यक छ
एउटा टिकट किन्न, तपाईं निम्न कागजातहरू पेश गर्न आवश्यक हुनेछ:
जन्म प्रमाणपत्र वा बच्चाको पासपोर्ट।
आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था बारेमा प्रमाणपत्र (शिविरहरूको लागि विशेष फारम)।
संक्रामक विरामीहरु (छैन पुराना3दिन भन्दा) संग सम्पर्क को अभाव बारेमा सोधपुछका।
सकारात्मक समीक्षा धेरै बाँकी जो शिविरमा (Tuapse), - "समुद्र लहर"। धेरै आमाबाबुले त्यहाँ आफ्ना छोराछोरीलाई हरेक वर्ष पठाउनुहोस्। हरेक स्वाद को लागि शिविर र एक समीक्षा मा उल्लेख गर्ने छोराछोरी आफूलाई, समुद्र निकटता, आराम कोठा, इलाका को सौन्दर्य, भद्र कर्मचारी, व्यावसायिक सल्लाहकार र शिक्षकहरूलाई, मनोरञ्जन प्रशस्त जस्तै। कहिलेकाहीं तपाईं शिविरमा बारेमा पनि उत्साहित बयान फेला पार्न र गर्न सक्दैन। उदाहरणका लागि, छोराछोरीलाई भोजन ostyvshimi जारी हुन सक्छ रूपमा एक disgruntled स्थानीय भोजन छ। तर, यस्तो समीक्षा अपेक्षाकृत दुर्लभ र अधिक सकारात्मक छन्।
तसर्थ, "समुद्र लहर" - एक राम्रो प्रतिष्ठा छ कि एक शिविरमा। बच्चा पक्कै राम्रो विश्राम छ, नयाँ अनुभव टाइप र आफ्नो स्वास्थ्य सुधार।
स्नान बच्चा - सम्पूर्ण परिवारको लागि रमाइलो
बाल सदन मा एक साप्ताहिक कसरी व्यवस्थित गर्न
वजन बच्चाहरु तालिका - आमाहरु लागि अपरिहार्य उपकरण
कसरी बच्चा लेख्न सिकाउन? केही सुझावहरू
बच्चाहरु को लागि फ्लू शट: "को लागि" र "विरुद्ध।" खोप आवश्यक छ?
जाली Fireplaces - लक्जरी र आराम आफ्नो घर को!
Kennels, येकाटिरिनबर्ग: कहाँ दोश्रो फेला पार्न?
Oster Grigory: प्रेम संग बच्चाहरु
दुबई आकर्षण - पूर्व को आकर्षण